Nodoran’ny dahalo ny tanàna: olona 14 indray maty, maro ny naratra | NewsMada
Nodoran’ny dahalo ny tanàna: olona 14 indray maty, maro ny naratra
Par Taratra sur 26/10/2019
Olona 14 indray maty vokatry ny asan-dahalo tao amin’ny kaominina Marotsiraka distrikan’Amboasary Atsimo, omaly. Nanafika no sady nandoro tanàna ireo dahalo ka niafara tamin’izao fahafatesana olona marobe izao…
Nitrangana fanafihan-dahalo mahery vaika tao amin’ny kaominina Marotsiraka, distrikan’Amboasary Atsimo, omaly vao maraina tamin’ny 5 ora sy sasany. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary any an-toerana, tanàna maromaro ao amin’io kaominina io no notafihan’ireo andian-dahalo ireo. Tsy vitan’ny nanafika ireo malaso fa mbola nodoran’izy ireo koa ny tanàna. Tsy nanaiky lembenana anefa ireo fokonolona tao an-toerana fa niezaka nanohitra. Vokany, miisa 14 ireo olona namoy ny ainy, raha ny fampitam-baovao voaray farany avy any an-toerana, omaly. Maro ihany koa ireo naratra, saingy efa nentina haingana namonjy toeram-pitsaboana. Nodoran’ireo dahalo avokoa ny ankamaroan’ireo trano tao amin’ity kaominina ity ka nitarika ny fahafatesan’ireo olona ireo, raha ny loharanom-baovao voaray hatrany. Lasa nitsoaka avy hatrany ireo dahalo taorian’izay sady nitondra ny omby tao an-tanàna. Nahazo antso ny zandary avy ao amin’ny poste avancé Marotsiraka ka nanao ny fanarahan-dia.
Mandry andriran’antsy ny mponina…
Mitaintaina hatrany ny mponina any amin’iny faritra iny amin’ny firongatry ny asan-dahalo. Misy ny ezaka ataon’ny mpitandro filaminana amin’ny famongorana izany, saingy tsy kely lalana ny ratsy, hany ka zary lasa miraviravy tanana sy kamboty ny mponina. Andrasana, araka izany ny tohin’ity raharaha asan-dahalo namoizana ain’olona ity.